‘पूँजीगत खर्चको व्यापक परिचालन अहिलेको आवश्यकता’ « Janata Samachar
‘पूँजीगत खर्चको व्यापक परिचालन अहिलेको आवश्यकता’
प्रकाशित मिति : 13 January, 2019 8:23 am
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रीय सदस्य डा. विजयकुमार पौडेलले पूँजीगत खर्चमा कमी हुँदा अर्थतन्त्रमा असर परेको बताउनु भएको छ । योजना छनोटका क्रममा विवाद हुने र समयमै योजनाको कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्तिले पूँजीगत खर्चमा कमी आएको उहाँको भनाइ छ ।
एक कार्यक्रममा बोल्दै डा. पौडेलले अहिलेको आवश्यकता व्यापक पूँजी परिचालन गर्दै विकासे कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने भएतापनि हुन नसकेको बताउनुभयो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा छनोट गरिनुपर्ने योजनाको बिषयमा स्पष्टता नहुँदा पूँजी स्थिर रहेको उहाँको दाबी छ । कर्मचारी समायोजनमा भएको ढिलाइले पनि बजेट खर्चमा कमी आएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । प्रदेश र स्थानीय तहमा विकासे बजेट खर्चमा आएको गिरावटलाई समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भानाइ छ ।
एक फरक प्रसंगमा बोल्दै डा. पौडेलले नेकपाका केन्द्रीय सदस्यहरुको जिम्मेवारी छिट्टै बाँडफाँट हुने आश्वासन दिनुभयो । नौ सदस्यीय कार्यदलले एकताको खाका र पोलिटब्यूरो गठनको कामलाई तीव्रता दिएको बताउँदै उहाँले छिट्टै नतिजा आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । डा. पौडेलले कांग्रेसले गठन गर्न लागेको छाँया सरकारले राम्रो काम गरे सरकारका कामलाई सही दिशामा लैजान प्रेरित गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । स–साना एजेन्डालाई लिएर सरकारको विरोध गर्नु प्रतिपक्षको धर्म मात्रै सम्झेर यस्ता कार्यमा नलाग्न कांग्रेसलाई उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
धर्मनिरपेक्ष मुलुकमा हिन्दु धर्मको एजेन्डालाई लिएर अगाडि बढ्नु कांग्रेस आफैलाई दुर्भाग्य हुने उहाँको धारणा छ ।
‘नेपालका जलरङकर्मी अन्तर्राष्ट्रिय कार्यशालामा’
कार्यशालाको अवधिमा ख्यातिप्राप्त कलाकारहरुले ‘डेमोस्ट्रेशन पनि दिएका थिए ।
‘समाज, परिवार र विद्यालयमा बोल्न नसकेका विषयलाई नाटकमार्फत समेटिएको छ’, नाटककी मुख्य पात्र सोनिका तामाङले